Roblox Hack: Heino Maitiro Akabirwa Maakaundi eRoblox Muna 2022 | la-manette.com
Isu takaona vanhu vachitsvaga maitiro ekubira maakaundi eRoblox uye / kana akanakisa Roblox account hacker. Mirira, izvi zvinogoneka here? Ko Roblox Robux Hack Iripo? Hezvino zvese zvaunoda kuziva nezveRoblox hack uye Roblox account hacker.
Kufungidzira musimba - ndicho musimboti weRoblox. Kana vangopinda, vatambi vanopihwa zvidhinha, zvombo, zviwanikwa, uye maturusi, uye vanogona kusarudza zvavanoda kuvaka nazvo. Ngave iri-yekutamba mitambo yakaita seMeepCity kana yakakurumbira jeri rekutiza mutambo Jailbreak. Iko kune chaiyo yakakura yakakura yemhando dzemhando dzekusarudza kubva.
Roblox ipuratifomu yekugadzira mitambo yepamhepo vatambi vakawanda vakananga kuvana vane makore masere zvichikwira. Kusiyana neClub Penguin uye ilk yayo, Roblox inobvumira vashandisi kugadzira mitambo inogona kutamba nevamwe vatambi. Uyu mutambo unozivikanwa zvakanyanya uye nekuda kweichi chikonzero ruzhinji rwevechidiki vasingakwanise kuwana mama uye baba kadhi rechikwereti vanogona kutsvaga nzira yekubira iyo Roblox account yevamwe vatambi uye pamwe kutora Robux yavo (kureva mu-mutambo mari. )
Onawo: Maitiro ekubaya sei Roblox account
Zvino iwe unofanirwa kunge uchinetseka kuti chinyorwa ichi chinorevei, kana paine chaizvo nzira yekubira maakaundi eRoblox uye kana Robux hack iripo? Nhasi tichaburitsa zvese zvaunoda kuziva nezveRoblox Hacking pamwe neRoblox Account Kubira. Saka gara wakanyarara, tora kapu yekofi, uye uverenge.
Verenga zvakare: Maitiro Ekuita Slide Show Mu Photoshop zviri nyore | Nhanho nenhanho gwara!
Maakaundi eRoblox anogona kubiwa here?
Husiku hwapfuura, takagamuchira email kubva kune mumwe wevaverengi vedu, amai kuti vataure chokwadi. Akatiudza kuti vakomana vake vanofarira kutamba Roblox asi maakaundi avo ari kugara achibiwa. Mumwe munhu kunze uko (pamwe hacker) ari kukanganisa ruzivo rwavo rweRoblox nekuba Robux yavo.
Akasuwa uye, nekushungurudzika, akaisa mhosva kune manejimendi weRoblox uyo waakati aisave nehanya nekuchengetedza account. Zvino, mumwe anoshamisika kuti nhoroondo dzevana vake Roblox dzakabiwa sei. Pane chaiyo nzira yekubira maakaundi eRoblox?
Mhinduro ndeyokuti kwete. Roblox haigone kubiwa neimwe nzira. Hapana muparidzi anogona kuwana mukana kuaccount yako kana iwe ukateedzera Roblox account kuchengetedza nhungamiro, kusanganisira kusaburitsa ruzivo rwako rwekupinda, senge mapassword, kune vamwe vashandisi uye kugonesa nzira mbiri.
Matsotsi anobira sei maakaundi eRoblox
Dzimwe dzenzira dzekubira dzinowana mukana kuRoblox maakaunti ndeye phishing uye / kana social engineering uye nekuisa keylogger software. Vazhinji vevagetsi vanorembera painternet vanoenda imwe maira kuti vadzidze kubira maakaundi eRoblox uye heino maitiro avanoita.
Kana kuedza kwekubira kwakakundikana, social engineering inopinda mukati. Kune vasina ruzivo, social engineering inzira iyo matsotsi anonyengedza vashandisi kuti vavape ruzivo rwakadzama runogona kuvabatsira kuti vanzvenga dziviriro zviri nyore. Imwe yemhando dzesocial engineering ndeye phishing, uye ndiyo yakajairika nzira yekubira maakaundi eRoblox.
Verenga zvakare: Yakanakisa Minecraft Mbeu YeXbox, PS4, Uye Yese Mapuratifomu
Kunyatsotaura phishing chiito chakashata chekuchengetedza mawebhusaiti emanyepo kana kutumira maemail emanyepo achinyepedzera sechinhu chakavimbika kuti uwane ruzivo rwakadzama semapassword nemaemail. Roblox Robux hapana mubvunzo kuti chinhu chinotsvakwa zvakanyanya, uye sezvo ichidhura mari chaiyo, vatambi vazhinji vasina mari inoraswa vanobatwa nehungwaru uhu.
Onawo: Maitiro ekutamba Roblox paOculus Kuda uye Kuda 2
Kudzvanya pane chinongedzo chine chinyorwa "Tora Yemahara Robux Pano" inoodzwa mwoyo zvakanyanya, uye iwe unofanirwawo kudzivirira mitambo inoti inokupa yemahara Robux yekutamba chete. Ivo vanokukumbira kuti uise zita rako rekushandisa uye password kuti utende, uye kana ukazviwana, ivo vanozoshandisa zvitupa zvako zvekupinda kuwana account yako uye kuba chero Robux yawakasiya.
Imwe yemhando dzekare dzekutyisidzira kwecyber dzichiripo ndeyekurekodha kwemakiyi. Hackers vanowanzoshandisa nzira iyi nekuda kwekushanda kwayo uye kungwara. Ivo vanonyanya kushandisa keyloggers, ari software yakagadzirirwa kumhanya kumashure, kurekodha chero makiyi makiyi aunoita nechinangwa chekuba mapassword uye imwe data inonzwisisika. Pavanongopedza kurekodha zvawanyora, vanotumira iyo data kune "mutadzi" paInternet.
Verenga zvakare: Microsoft yaizovandudza isina kutsigirwa Windows 11 PCs.
Hackers vanoshandisa nzira dzinoverengeka dzekuisa keylogger pa PC, uye izvi pasina ruzivo rwemuridzi wayo. Chekutanga pane zvese, ivo vanowanzo nyudza ivo nemahara software yakatorwa kubva kune wechitatu-bato saiti. Vanobva vazvivanza sesoftware isingakuvadzi uye voiparadzira neemail. Pakupedzisira, vanoiswa kure.
Kuti uzvidzivirire, tinokurudzira kuti uise software yakanaka antivirus uye edza kuchengetedza zvirongwa zvako zviri maererano. Edza kusavhura maemail anofungidzirwa uye chekupedzisira, dzivirira kurodha software kubva kusingazivikanwe masosi.
Saka idzi dzingori nzira shoma dzinoshandiswa nematsotsi kubira maakaundi eRoblox. Kuti ugare wakachengeteka, edza kusashandisa iwo mapassword akafanana kune yega account yaunogadzira online. Zvakare, dzivisa kupindura mibvunzo yekuchengetedza uye kugovera magwaro ako nevamwe.
Isingashandiswe Roblox Chipo Kadhi Makodhi
Imwe pfungwa pa "Roblox Hack: Aya ndiwo mabikirwo anoitwa maakaundi eRoblox"
January 5 2022 kuna 21 47 H Maminitsi